Koety: Tonga Amin’ny Fomba Ofisialy Ny Fahavaratra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2018 12:17 GMT
(Fanamarihana! lahatsoratra nivoaka tamin'ny Jolay 2007)
Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fahavaratra any Koety – mikatona ny sekoly, nanomboka ny fampianarana mandritra ny fahavaratra ary laharampahamehana ho an'ny blaogera rehetra ireo hetsika fanao mandritra ny fahavaratra.
Nahita zavatra ho atao mandritra ity fahavaratra ity i yo_ghurt ao amin'ny stillkuwaiting .
Raha mahatsapa ianao fa mila mitony mandritra ny adin'ny iray eo no eo ( ary tsy ao Koety amin'izao fotoana izao), ireto misy toerana maro isan-karazany manerana ny Corniche izay mampanofa jetski (na jetsky koa, toy ny fiteny azy eto)
Zavatra maromaro fanao mandritra ny fahavaratra no atolotr'i Zdistrict, izay mitsidika toerana iray vaovao ao Koety.
Tsy tena ohatry ny zavatra azo idirana ao Koety ny Sahara Golf Club, tena Lalana Golf vita tsara izay natao ho an'ny mpikambana ao aminy izany. Mila miditra ho mpikambana ianao vao afaka milalao ao, saingy tsy nisy olona hametraka fanontaniana. Manana tolotra hafa izy ireo, tiako ny tefibika (design) sy ny fampiasana hazo ao anatiny saingy tsapako fa somary ratsy ireo efitrano. Amin'ny ankapobeny, mihevitra aho fa paradisa ho an'ny lalao Golf rehetra izany ary raha nanana sakafo tsara izy ireo dia mety ho nisakafo teny ihany koa ny olona.
Ary aoka tsy ho adino ihany koa ny fialamboly ntaolo tian'ny olona indrindra ao Koety mandritra ny fahavaratra – manjono ! Manoratra i Mjkout ao amin'ny Q8i.org :
Misy sary vitsivitsy avy amin'ny dia nataonay tany amin'ny nosy 3oha tany Koety ato, fitsidihana nahafinaritra, tena niala voly be izahay, naka sarin'ny Tanànan'i Koety, Kuwait Towers aho teny an-dàlana nody….
Jereo ilay voninkazo ao aorian'ilay Fiara Mpaka Fako.. TSARA
Miresaka mikasika ny toerana haleha amin'ny fahavaratra, manontany tena mikasika ny fandriampahalemana ao amin'ilay kianja manaraka lohahevitra ao an-toerana i Hugs from Kuwait .
Nampanontany tena ahy momba ny fandriampahalemana any amin'ireo kianja fialamboly ao Koety ireny loza nitranga ireny. Ary heveriko ho tsy dia tena azo antoka izy ireo. Nankany amin'ny Entertainment City aho herinandro vitsivitsy izay. Nahita mpamily iray namela zaza 2 taona hiakatra eny amin'ilay gorisagorisa rosiana amin'ny haavo antonony niaraka tamin'ny ray aman-dreniny. Tena kely tokoa izy ka tsy nisy fomba hafa hamatorana azy tamin'ny sezany. Notazonin'ilay ray adala fotsiny izy tsindraindray arakaraky ny fandehan'ilay gorisagorisa. Ary nisy takelaka matevina teo amin'ny varavarana ary mazava ho azy fa kely loatra tsy tokony mbola handreha amin'io ilay zazavavy kely.
Mazava ho azy fa mafana any Koety – tena mafana be – ary mandao an'i Koety mihitsy aza ny olona sasany mba hankafizana ny fialantsasatra fahavaratrany any ampitan-dranomasina fa tsy miombon-kevitra amin'izany i Zaydounover ao amin'ny KUWAIT UNPLUGGED
تصدقون يا جماعة… مهما كان الجو سيء في الكويت، على الأقل يكون سيء في بلدنا أفضل بكثير من أن يكون سيء في البلاد التي نسافر إليها
Hainao ve..tsy misy dikany mihitsy na ratsy tahaka ny inona aza ny toetrandro ao Koety. Farafaharatsiny, mba tsaratsara ho anay ny maharatsy izany ao amin'ny firenenay, toy izay any amin'ny firenena handehananay.
هنا نستطيع تجنب الطقس السيء إما في البيت أو العمل، لكن أين المتعة في السفر طمعاً في جو جميل وشوارع أجمل عندما نصل هناك بعد عناء السفر وصرف المبالغ و لا نجد سوى الأمطار الغزيرة والغيوم السوداء الكئيبة التي لا تنفرج لأسابيع وتمنع الناس من الخروج… أي إجازة هذه بالله عليكم؟؟
Afaka fa miala ireo andro ratsy ianao, na amin'ny fijanonana any an-trano na any am-piasana, fa inona no fahafinaretana azo amin'ny fandehanana any amin'ny toerana tsara andro sy madio lalana ary avy eo rehefa tonga any, raha hahita ny orana mikija sy ny rahona mainty tsy mitsahatra mandritra ny herinandro maro ary manakana ny olona tsy hivoaka avy eo, taorian'ny fahasarotana rehetra nifandray tamin'ilay dia sy ny vola lany? Mba fialantsasatra toy inona izany?
Manontany tena i Qias ao amin'ny io81 hoe nankaiza ireo dokambarotra ary manontany raha toa ka misy hidirany amin'ny fahavaratra ny fanjavonan'izy ireny.
Isaky ny mamily mody any an-trano avy any am-piasana aho isanandro, mihaino ilay 88.8 tokana ary mijery ireo dokambarotra manerana ny làlana. Ratsy be avokoa ny ankamaroan'ny dokambarotra aty, fa farafaharatsiny aloha mba misy zavatra hojerena sy hihomehezana :p. Izany hoe, rehefa nody aho androany ! tsy nisy dokambarotra intsony ?!